အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းမီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသွားရောက် | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းမီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသွားရောက် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: ပါဝင်သောတစ်ခုကအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ညီလာခံ BJP ခေါင်းဆောင်များ နှင့်ကုလသမဂ္ဂထံသို့ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ၏မိန့်ခွန်းမီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသွားရောက်အခြားသူတွေဖြစ်ပါသည် အထွေထွေညီလာခံ ( ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ).
အထွေထွေညီလာခံဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်း ကုလသမဂ္ဂ စက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်စတင်သောတိုင်းပြည်, မိမိအခြောက်ရက်ကြာခရီးစဉ်သည်။
ဥပဒေပြု BJP ရာဂျစ် Pratap Singh ကကရူ, Shiv Priyanka Chaturvedi, Sena နှင့် Jaiveer Shergill နှင့် Manish Tewari ၏ရေးစပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့, ကွန်ဂရက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်သတင်းထောက်များနှင့်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကျွမ်းကျင်သူတွေကဝါရှင်တန်ဒီစီနှင့်နယူးယောက်မြို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ် ။
သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောအိန္ဒိယ-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်အကြောင်းအရာများနှင့်တောင်အာရှတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးအပေါ်အမေရိကန်အာဖဂန်ကောလာဟလများ၏သက်ရောက်မှုအပေါ် Observer Research Foundation နှင့် Heritage Foundation ကစီစဉ်ဝါရှင်တန်ရှိဆွေးနွေးချက်များ, တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏အပြင်ဘက်တွင် Jaiveer Shergill အပေါ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှပြောမည် "ဒီမိုကရေစီအပေါ်နည်းပညာ၏သက်ရောက်မှု။ "
ဒါဟာဒီနှစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယအကြိမ်အထွေထွေညီလာခံဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအာဏာလာမယ့်အပြီးစက်တင်ဘာလ 2014 ၌သူ၏ပထမဦးဆုံး။
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂုဏ်သိက္ခာမိုဒီအောက်မှာတိုးတကျခဲ့: BJP Nalin Kohli တွင် 'မိုဒီမင်္ဂလာပါ!' ဖြစ်ရပ်များ | အိန္ဒိယသတင်း
စိရယျလျ Ramaphosa: "တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမုန်းတီးနေကြသည်မဟုတ်"!
ဘန်ဝစ်နံနက် 22 2019 အောက်တိုဘာလ - ဗွီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,383